MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းတာ ဘာများ အလိုမကျစရာ ရှိသလဲ?
(Kachin Duwa Blog)
ကိုယ့်နယ်၊ ကိုယ်ဇာတိ ကိုယ် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် တောင်းတာ ဘာများ အလို မကျစရာ ရှိသလဲ? ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အတော်များများမှာ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်နယ် ကို အုပ်ချုပ်နေကျပါတယ်။ မကောင်းတာ ဘာမှ မရှိပါ။
at 12/16/2012 03:27:00 PM